Ungazi Kanjani Uma Umuntu Ekuvimbile Ku-Instagram
Ukukwazi ukufaka ohlwini lwabantu abamnyama ezinkundleni zokuxhumana kusiza ngendlela emangalisayo, kepha kungakhathaza uma usohlangothini lomamukeli futhi ungaqondi ukuthi kungani kwenzeke kanjani noma kanjani.
Uma ucabanga ukuthi uvinjelwe ku- Instagram, Ungakhathazeki : awusiye umuntu wokuqala ukuvinjelwa ezinkundleni zokuxhumana futhi ngokuqinisekile ngeke ube owokugcina.
Kunezindlela eziningana zokutshela uma ngabe uvinjelwe noma cha., ngakho-ke unganqikazi ukubuza !
Lokhu empeleni ungasho kanjani ukuthi othile ukuvimbele i-Instagram.:
Ngeke ukwazi ungamboni umsebenzisi uma umfuna
Awukwazi zibone kubalandeli bakho noma kulabo abakulandelayo
Okuthunyelwe kwabo ungaveli
Ngeke ukwazi ungaziboni izindaba zabo ze-Instagram
Noma ubathumela umyalezo, bona ngeke ngiyithole hhayi
Bona ngeke ngibone hhayi okuthunyelwe kwakho
Bona ngeke ngibone hhayi ukuphawula kwakho kokunye okuthunyelwe
Okwabo Oxhumana naye uyanyamalala (uma ngabe uke waba nemiyalezo yangaphambilini evela kubo)
Ungazi Kanjani Uma Umuntu Ekuvimbile
Kwesinye isikhathi abantu bavele basule i-akhawunti yabo, noma i-Instagram ivimbela ama-akhawunti. Lapho lokhu kwenzeka, izimpawu ezingenhla zinezici ezifanayo nalapho umuntu ekuvimba.
Le kuyindlela eyodwa yokuqinisekisa, futhi kusebenza kanjena:
Qala ngokuzifuna kusuka ku-akhawunti yakho. Uma ungaziboni, kungenzeka bashintshe igama lomsebenzisi ; ngakho-ke qiniseka ukuthi ubheka namanye amagama.
Ensuite, buza umuntu ukuthi ungasebenzisa i-akhawunti yakhe ukuthola umsebenzisi, noma sebenzisa enye i-akhawunti uma unayo.
Sesha i-akhawunti futhi uma ivela ku-akhawunti yomunye umsebenzisi, kungenzeka ukuthi uvinjelwe.
Le akuyona ukuphela kwendlela yokwazi ukuthi ngabe uvinjelwe ngempela yini, kepha sithole ukuthi le yindlela elula futhi ethembeke kunayo yonke.
Yini Engingayenza Uma Umuntu Engivimbile Ku-Instagram
Ngeshwa, akukho okuningi okumele kwenziwe kulesi simo, ngoba uhlelo lwenzelwe ukuvikela abasebenzisi abavimba abanye, futhi kufanele. Noma kunjalo, uma ucabanga ukuthi uvinjwe ngengozi, nokuthi lo ngumuntu omaziyo, xhumana no enye inkundla yezokuxhumana bese umbuza ngakho.
Ngezikhathi ezithile, kungaba iphutha futhi konke kuhamba kahle, bangakuvulela ohlangothini lwabo. Uma, noma kunjalo, bekuwukuvinjelwa kwangempela, leli yithuba lakho lokulungisa izinto bese uthola ukuthi konakelephi. Khumbula ukuthi uma uphathe kabi noma uhlukumeza lowo muntu, unelungelo lokwenza lokhu futhi mhlawumbe ufanelwe ukuvinjelwa.
Ungakuthola kanjani ukuthandwa okuningi ku-Instagram : 15 Conseils et les Meilleures Applications
Article précédentUngaxhumana Kanjani nabathonya ku-Instagram
Article suivantInstagram ne me laisse pas me connecter : Guide de réparation